Tantara: Jona sy Ilay Trondro Be - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Nefa tsy naniry handeha i Jona. Koa nitaingina sambo iray izay nandeha ho any amin’ny lalana mifanohitra amin’i Ninive izy. Tsy nahafaly an’i Jehovah ny nandosiran’i Jona. Koa nalefany ny taﬁodrivotra lehibe iray. Ratsy loatra izany ka saika nilentika ilay sambo. Natahotra aoka izany ireo tantsambo, ary niantso an’ireo andriamaniny mba hanampy azy.
Farany, dia hoy i Jona tamin’izy ireo: ‘Manompo an’i Jehovah, ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mandositra aho izao mba tsy hanao izay nasain’i Jehovah nataoko.’ Koa nanontany ireo tantsambo hoe: ‘Inona no tokony hataonay aminao, mba hitsaharan’ny taﬁodrivotra?’
‘Atsipazo any an-dranomasina aho, ary dia ho tony indray ny ranomasina’, hoy i Jona. Tsy naniry hanao izany ny tantsambo, nefa noho ny taﬁodrivotra niharatsy, dia nanipy an’i Jona izy tamin’ny farany. Avy hatrany dia nitsahatra ny taﬁodrivotra, ary tony indray ny ranomasina.
Bokin’i Jona ao amin’ny Baiboly.
Inona no nasain’i Jona nataon’ireo tantsambo, mba hitsaharan’ny taﬁodrivotra?
Vakio ny Jona 1:1-17.
Nanao ahoana ny ﬁhetsik’i Jona rehefa nirahina hitory tany Ninive izy? (Jona 1:2, 3; Ohab. 3:7; Mpit. 8:12)
Vakio ny Jona 2:1, 2, 10.
Nahoana isika no tsy tokony hitsara an-tendrony ny olona ao amin’ny faritanintsika, araka ny ﬁtantarana momba an’i Jona sy ny Ninivita? (Jona 3:6-9; Mpit. 11:6; Asa. 13:48)